यस्तो साठगाँठ गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको दाउ ! - Media Dabali
यस्तो साठगाँठ गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको दाउ !
काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेपनि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुनावमै नगई प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले दाबी गरेका छन् ।
पोखरेलले नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलसँग साँठगाँठ गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा लागेको बताए ।
सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा मंगलबार आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले प्रचण्ड र माधव नेपालले महाधिवेशनबाट चुनिएको अध्यक्ष ओलीलाई हटाउने गलत प्रयास गरेको समेत बताए । पार्टी छाडेर गएकाहरूलाई फिर्ता हुन समेत पोखरेलले आग्रह गरे ।
पोखरेलले पार्टी एकताका बेलादेखि नै पार्टीभित्र अन्तरिक समस्या रहेको बताएका छन् । २ पार्टीबीच एकता हुने बेलामा पार्टीभित्र राम्रोसँग अभ्यास नभएकाले अहिले पार्टीमा फुटको अवस्था आएको पोखरेलले बताए ।
आगामी बैशाख १७ र २७ गते २ चरणमा चुनाव हुने बताउँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कार्यकर्तालाई चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिए । ‘चुनाव हुँदैन कि भन्ने अब कुनै शंका छैन, निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा लागिसकेको छ,’ उनले भने ‘यो कुनै राजा महाराजाले गराउन लागेको चुनाव हैन । जनताबाट निर्वाचित सरकारले नयाँ जनादेश लिन गराउन लागेको चुनाव हो ।’
पोखरेलले प्रचण्डले जहिले पनि अवसर, अन्तरविरोध र पार्टीलाई तरङ्गित पारेर अगाडि बढ्ने गरेको आरोप लगाए ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सन्दर्भमा पोखरेलले सबैथोक बदल्न सकिने तर छिमेकी बदल्न नसकिने भन्दै भारत कुनै समय बेलायतको गुलाम भएको भन्दै नेपाल कुनै देशको गुलाम नभएको बताएका छन् । सर्लाहीसँग जोडिएको नेपाल–भारत सीमा नाका ३–४ दिनभित्रै खुल्ने पोखरेलले बताए ।
हेलिकप्टरबाट लिपुलेक घुमेपछि सीमा अतिक्रमणबारे बोल्नै छाडे ईश्वर पोखरेल
मंगलवार, बैशाख ३० २०७७०२:३४:४५